Home Mmemme Onye Mmekọ
Mgbakwunye mmemme bụ nnukwu ohere maka ị nweta ego site na ire ngwaahịa ngwaahịa ngwanrọ na-emeri mmeri. Anyị na-anabata onye ọ bụla, site na ndị mmadụ, obere ụlọ ọrụ na magazin, ọnụ ụzọ, na ụlọ ahịa.
DataNumen Mgbakwunye mmemme kachasị mma. N'ihi gịnị?
Ọrụ dị elu, usoro pasent na-agbanwe agbanwe.
Maka ire ọ bụla ị na-emepụta, ị ga-enweta ihe na-erughị 20% nke ego zuru ezu. Ọrụ na-abawanye dabere na arụmọrụ gị! Igwe dị elu nke ngwaahịa anyị na-agbake data bụ, ka pasent gị ga-abụ.
DataNumen ngwaahịa na-ewu ewu.
Ọ bụ ya mere anyị ji enye gị nkwenye siri ike nke ọkwa ọkwa dị elu. Dị ka onye ndu ụwa na teknụzụ mgbake data, anyị erewo ngwanrọ mgbake data na-emeri ihe karịrị mba 130. Ndị ahịa anyị sitere na novice kọmputa na ndị ọkachamara IT ọkachamara na ndị na-eweta data mgbake, site na obere ụlọ ọrụ na nnukwu azụmaahịa gụnyere akụ 500. N'ezie, kọmputa ọ bụla nwere ike ịnwe ihe achọrọ na ngwaahịa mgbake data anyị.
Nkwado ozi zuru ezu.
N'ịbụ onye mmekọ anyị, ị ga-enweta ozi dị ezigbo mkpa ma nyere aka:
ịzụrụ ihe na nbudata na nbudata (ọnụego mgbanwe) maka ngwaahịa niile,
omume ahịa anyị na ọdịnihu,
ngwaahịa anyị kacha ere ahịa.
Iji mee ka o kwe omume, anyị na-ebu ozi pụrụ iche postịbanye maka ndị mmekọ ma kwado ngalaba mgbakwunye mgbakwunye yana ọtụtụ ozi ahịa gbasara ngwaahịa anyị. Ọ ga - enyere gị aka ịhọrọ ngwaahịa kacha mma ị ga - ere na saịtị gị, bulie ahịa gị, ma tulee ire ahịa.
Nchịkọta zuru ezu nke ihe nkwado.
Ngwa nkwalite niile maka ngwaahịa niile (dịka nkọwa, mgbasa ozi na nkwukọrịta, ọkọlọtọ, onyinye, nyocha, echiche ndị ahịa kacha mma, ajụjụ ọnụ nke ndị mmepe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ) dịịrị ndị mmekọ anyị oge niile. Gaghị enwe oge dị ukwuu mgbe ị na-achọ ọkọlọtọ ma ọ bụ foto ịchọrọ na saịtị ahụ.
Imekọrịta mgbasa ozi mgbasa ozi na omume ahịa.
Anyị nwere ike soro gị rụọ ọrụ mgbasa ozi kwadoro. Onu ahia puru iche diri ndi ahia, ya na otutu ego, ahia ezumike, ozi ozigbo na otutu. Nwere ike ịrịọ arịrịọ oge niile iji nweta ụdị mgbasa ozi n'ụdị ọ bụla. I nwekwara ike ịdabere na mmụba pasent ọrụ mgbe ị na-ahazi akụkọ postịbanye, mgbasa ozi mgbasa ozi, na omume ahịa. Mgbe ụfọdụ, anyị nwedịrị ego na-eme ụdị ihe ahụ. Have nwere echiche? Kpọtụrụ anyị!
Nkwado ngwa ngwa dị mgbe niile.
Ajuju ọ bụla, aro na arịrịọ ga-atụle ma ị ga-enweta nzaghachi dị elu n'oge kachasị dị mkpirikpi. Biko, jiri ụdị nzaghachi anyị jụọ ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ mee arịrịọ gbasara mmemme mmemme anyị.
Mgbe ị debanyere aha anyị na mgbakwunye, anyị ga-ekenye gị NJ Mgbakwunye.
Site na NJ Mgbakwunye a, ị nwere ike iwepụta njikọ njikọ pụrụ iche maka ngwaahịa anyị ọ bụla. Ọ bụrụ na ndị ahịa gị zụtara site na njikọ njikọ usoro a pụrụ iche, mgbe ahụ anyị ga-achọpụta ntụgharị aka gị wee nye gị ọrụ ahụ.
Site na NJ Mgbakwunye a, ị nwekwara ike iwepụta njikọ pụrụ iche na ibe weebụ ọ bụla na saịtị ụlọ ọrụ anyị. Ọ bụrụ na onye ahịa gị gara na ibe weebụ site na njikọ a pụrụ iche, a ga-echekwa kuki na kọmputa ya na NJ njikọ gị echekwara na ya. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ndị ahịa azụrụ ngwaahịa anyị n'oge ọzọ, a ga-amata kuki ahụ ma ekenye gị ọrụ ahụ. Kuki ahụ dị irè maka ọnwa 6 ma ọ bụrụhaala na onye ahịa gị mere mkpebi nzụta ya n'ime ọnwa isii kemgbe ọ gara leta ibe weebụ anyị, ị ga-enweta ọrụ ahụ n'aka nzụta ya.
Nweta starDị ugbu a
Ihe mmemme anyị nwere jikọọ MyCommerce.com na FastSpring.com, ha abụọ bụ ndị isi guzobere na mmemme mgbakwunye ngwanrọ. Nwere ike ịhọrọ ma otu dị ka mmasị gị. Mgbakwunye mmemme dị mfe. Enweghi zoro ezo costs na ọ bụ free ịbanye.
Debanye aha Mmemme Mgbakwunye MyCommerce.com
Debanye aha Mmemme Mgbakwunye FastSpring.com
Mgbe ndebanye aha, anyị ga-ezitere gị email nwere NJ gị mgbakwunye na ntuziaka ka starka i wee nwee ike irite ego ozugbo!
Ọ bụrụ n’inweela akaụntụ mgbakwunye na MyCommerce.com ma ọ bụ FastSpring.com, biko biko banye na ngalaba njikwa gị wee chọta anyị sonyere na start. Njirimara ndị na-ere anyị bụ 39118 na MyCommerce.com na datanumen na FastSpring.com.